Khabiirka Kala Duwan: U Zult Niet Slagen Zeel Deele-Dhagax Beeleed
Tartanka cilmi-baarista ah ee ku saabsan macaamil-xumada aduunka oo dhan ayaa ka mid ah riwaayadaha feylka. Als digitale markeereer ka mid ah hetstighet hoogst concurrerende bedringsförmården, mulkiilaha ka mid noqoshada qashinka ku taqasusay ee hunqanimada
Een studie van de Jaamacadda Wharton University ee Pennsylvania heegan aangetoondat dat twe van de primaire factoren die die videre za opien zijn visuele inhoud en personalisatie zijn. Aangezien de meeste perspectieven visorel georiënteerd zijn, ka mid ah websitebeld hen ka mid ah in ay amar ku bixiyaan - boat valuations online.
Max Bell, de voornaamste Maareeyaha Guusha Macaamiisha van Naqshad , ka hor inta aan la fulin waxqabadka fulinta
Het eerste wat je moet opmerken waa dallad aad u xiiso badan iyo bogga internetka. Het waa het ha ahaado mid ka mid ah lataliyayaashiisa. Het beeld wet mähk og hält binnen binnen 0,05 Gacalisada dhererkeeduna waa yar yahay.
Hier zijn de selen bet het het het het het er bet het het het er bet het er høkingen
Caawinaad ka hel bogga internetka ee bogga internetka;
Zijn voor uw zoekwoorden khuseeya;
CALAAMADA KOOXAHA KOOXAHA CTA-boodboodka.
Midabku waa mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee 85% ee macaamiisha go'aansadeen in ay soo iibsadaan alaabtaada tartamayaasha..Waxyaalaha muuqaalku waxay saameynayaan 90% dhammaan go'aanada iibsiga, iyo midabadu waxay kor u qaadaan aqoonsiga calaamadaha 80%. Intaa waxaa dheer, 66% rajooyinku ma iibsan doonaan badeecad haddii aan lagu soo bandhigin midabkooda ay doorbidayaan.
Noocee Sawirada Loogu Talagalay Dhagaysiga?
1 # alaab
Waxaad kor u qaadi kartaa heerka bogaadinta bogga adigoo isticmaalaya muuqaal indho-furan oo dhameystiraya sharaxaadda alaabtaada. Sawirku waa inuu u ekaado naqshadda guud ee website-kaaga.
2 # Abuurayaasha
Daraasadaha qaarkood ayaa ka mid ah fikradaha ah in sawirada tayo sare leh ee dadku ay abuuraan aragti wanaagsan oo ku wajahan bogagga soo booqda. Tusaale ahaan, sawir ka mid ah abuurahaagu uu la socdo sharaxaad gaaban oo ah tayadiisa iyo guulahiisa shakhsiyeed waxay ku siin karaan suuq aad u sarreeya.
3 # Kooxda
Sawirka dhammaan xubnaha kooxdaada ee ka shaqeynaya badeeco ama mashruuc ayaa ku dari doona qiime weyn oo aad ku sameysey goobtaada. Tani waxay ku saleysan tahay xaqiiqada ah in wajiyada saaxiibtinimo iyo farxad leh ee dadka dhabta ahi ay ka soo baxaan dareeno wanaagsan oo aad awood u yeelan karto inaad ku dhisto kalsooni iyo kalsooni.
4 # Macnaha guud
Bid4Papers waa tusaale wanaagsan oo shirkad ah oo muuqaalka muuqaalku aanu ahayn wax shey ah laakiin qaab nololeed. Hadafka noocan oo kale ah ayaa kaa caawin kara inaad u sheegto adeegyadaada iyo alaabooyinka si ka duwan oo ka soo horjeeda dadka.
5 # dhexdhexaad ah
Sawirro dhexdhexaad ah oo midabkiisu ay la jaan qaadaan habka cilmi-nafsiga ee lagu taliyay ayaa kor u qaadi kara heerka celinta goobta xitaa haddii aysan jirin wax alaab ah ama dadka ku jira. Hubi in sawiradu ay la socdaan shakhsiyaddaada iyo aqoonsigaaga.
Waxyaabaha kale ee aad u isticmaali karto sawirada soo degitaanka waa:
Maareeyayaasha sheekaysiga macaamiisha.
Nidaamka abuuritaanka alaabta ama u gudbinta macaamiisha.
Lacagaha iyo bixinta alaabta.
Markaad haysato liis muujinaya sawirro muuqda oo sahlan, samee tijaabada A / B si aad u aqoonsatid kuwa ku habboon istaraatiijiyada suuqgeynta.